Dodola (magaalaa) - Wikipedia
Dodolaan magaalaa Oromiyaa gurguddoo keessaa tokko yoo taatu, Godina Arsii Lixaa Aanaa Dodolaa keessa argamti. Magaalaa tun barumsaa fi daldala addaa addaa irratii kan hundooftee dha. Akkasumas magaalaa tun misoomaa fi industurii dhaan carraa guddaa carraaqaa kan jirtuu dha. Keessumayyuu yeroo ammaa saffisaan kan guddachaa (heddu misooma) jirtuu dha.
Ummattootni magaalaa tana keessatti argaman kuma 20000 ol ta'a jedhamee yaaddama. Magaalaa tana keessatti afaanota addaa addaa sagalii (9) oltu dubbatama.
Baldhinni lafa ishiis kiloomeetir isqu'arii 120 fi bishaan kiloometr isqu'arii 0.9 ta'a jedhamee yaaddama. Magaalotiin ollaa ishii kaaba-bahaan Shaashamannee ,kibbaan Adaabbaa, fi bahaan Boqqojii fa'a. Haalli teesuma lafaas ishii tulluwwa, garreeni fi bishaanin marfamaa dha.
Qileensi ishii bayyee kan namatti toluu fi kan nama gammachiisu dha. Yeroo bona ho'a, yeroo Gannaa xinnoo qorra, Arfaasa jiddugalessaa fi Birraa humditii (gammachisa) kan ta'ee dha.
Dodola dandii konkolataa kan Shaashamanne irra ka'ee Dodola keessa darbee Adaabbaa dhaquu fi Dodola irraa ka'ee Boqqojii dhaqu qabdi. Dandiin kun kan cirrachaan afameedha. Yeroo amma aaspaltii afuuf tattafii godhaa jirti.
Dodola manneen barnoota sadarkaa tokkoffa (Elementary school), sadarkaa lammaffaa (Highschool) fi Qophaa'ina (preparatory) tan of keessaa qabduudha.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Dodola_(magaalaa)&oldid=33166" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 31 Haggaya 2020, sa'aa 08:44 irratti.